Homeसमाचारभर्खरै चितवनबाट आयो दु:खद खबर ! चितवनमा अटो दु’र्घटनामा परी ५ जनाको मृ’त्यु
December 7, 2019 Spnews समाचार Comments Off on भर्खरै चितवनबाट आयो दु:खद खबर ! चितवनमा अटो दु’र्घटनामा परी ५ जनाको मृ’त्यु
चितवनको राप्ती नगरपालिका ४ मा शनिबार साँझ अटो दु’र्घटना हुँदा ५ जनाको मृ’त्यु भएको छ । घ’टनामा एक जना ग’म्भीर घा’इते छन् ।
चेपाङमार्ग भएर चौकी डाँडातर्फ आउँदै गरेको ना १ ह ६४०९ नम्बरको अटो अनियन्त्रित भई पल्टिँदा ५ जनाको मृ’त्यु भएको ईलका प्रहरी कार्यालय भण्डाराले जनाएको छ।
घ’टनामा परी पर्बतको कुस्मा नगरपालिका पिपलटारी बस्ने श्यामप्रसाद तिवारीसहित ५ जनाको मृ’त्यु भएको छ । अन्य मृ’तकको सनाखत हुन सकेको छैन ।